TAARIIKHDA DARAAWIISHTA IYO DOORKII BURCO.
Tuesday October 22, 2019 - 18:44:59 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
Halgamaagii waynaa ee Sheekh Bashiir wuxuu ku dhashay xaruntii
Burco (Burcoonline) 22.10.2019 Halgamaagii waynaa ee Sheekh Bashiir wuxuu ku dhashay xaruntii Daraawiishta ee Taleex sanadkii 1905-kii. Sh. Bashiir aabihii Sh. Yuussuf Sh. Xasan waxay Sayidka ku kulmeen magaalada BEER oo 30km dhinaca bari ka xigta Burco dabayaaqadii qarnigii 19aad, waxaanay isla qaateen in la abaabulo xoogag lagula dagaalamo gumaystaha.
Hadaad doonayso in aad ogaato halka dhab ahaan halgankii daraawiishtu ka bilaabmay - marka laga tago huuhaada IDAAJAA shubo- waa magaalada Burco, Oodwayne, Beer iyo Buuhoodle.
Sayidku markuu dalka ku soo laabtay wuxuu yimi Berbera isaga oo sita laba fekradood oo kala ah fidinta dariiqada Saalixiya iyo dagaalka gumaystaha. Lakin Berbera waxaa xoog ku lahaa dariiqada Qaadiriya, sidaa aawadeed waxba way uga socon waayeen.
Wuxuu markiiba yimi Burco waxaanay si wayn isu fahmeen qoorwayntii reer Burco waxaanay isla qaateen labadii fekradoodba, Ilaa haddana Burco Saalixiyadu raad wayn ayey ku leedahay.
Suldaan Nuur, Suudi Shabeelo oo ahaa markii danbe madaxii khusuusiga, Ibrahin Buqul, Sh Yuusuf Sh. XASAN iyo rag badan oo ahaa hormuudkii bulshada ayaa raacay, qaarkoodna waabay wada socdeen sida Ina Shixiri iyo Xaaji Suudi Shabeelo oo waxay iska doo raaceen CADAN. Ragaasi waxay gayn jireen marba masaajid si uu uga khudbadeeyo oo dadka loogu sheego Saalixiya iyo jihaadka.
Maalin ayàa Beer la geeyey si uu dadka ula hadlo wuxuu Ashahaadii ku daray 'فى كل لمحة عدد سنين nin mar lagu sheego Cabdi Jiir marna Ducale Cilmi ayaa u jawaabay oo yidhi" laa ilaaha ilalah garanay, maxamadu rasuululaah na garanay laakin Habarjeclo LAXAMLAXAM TAA danbe way iska soo hubsanaysaa"
Rag lagu qiyaasay konton nin oo hormoodkii bulshada ayaa raacay, inkastoo qaarkood bid uga gurteen qaar kale na waabay ku dhinteen.
Somalidu way isku dayataa markii la maqlay qoorwayntii reer Burco way raaceen, ayaa Buuhoodlena si xoodleh loogu diyaar garoobay, halkaas oo cududii ugu badnayd ka raacday. Waxaanu u sii talaabay Nugaal oo uu dagaalada ka gaalaa bixin jiray.
Markii uu Sayidkii jabay halgankii gumaysi la dirirka waxaa markale xarun u noqotay Burco.
Bishii February 1922 ayaa dagaal lagu diidan yahay cashuur ta ka dhacay Burco. dagaalka waxaa lagu dilay DC gii ingriiska ee loo yaqaanay Allen Giib. Archer oo Somalidu u tagaanay Caarshe oo ahaa gaalkii wakhtigaa xukumayey Somaliland maalintaa Burco ayuu joogay dirqi ayuuna ku fakaday. Caarshe wuxuu dalbaday ciidamo dheerada iyo diyaarado, waxaana gebi ahaanba uu gubay Ingriisku magaalada Burco sanadkii 1922kii. (Waa meeshii labaad ee dhulka Somalida lagu duqeeyo diyaarado) Waxaanu ku dhaqaaqay aargoosi foolxun oo uu kula kacay isagoo beelihii Dhinaca Odwayne uu ku xukumay 3000 oo halaad. Laakiin waa la diiday oo waxaa la raacay Fatwadii Sheekh Muxumed yare oo ahayd magta gaalku waa 33.3 yacnii Muslim sadex loo qaybiyey meel ahaan. Ingiriikii markale ayuu ka cadhooday quudhsigaa waxaanu ku qaaday weerar laxaad leh. Weerarkaa waxay iskaga hor yimadeen ciidamo xoodleh oo uu hogaaminayey XAAJI WARAABE ( XAAJI WARAABE WAA ABAANDUULIHII DAGAALKII WAYNAA EE LA BAXAY HAGOOGANE)
Muddo ka dib waxaa hawdka Burco lagu dilay gaalkii ay Soomalidu u taqaanay FEEDHOOLE. Markale waxaa cirka isku shareertay xiisadii waxaana socon jiray dagaal joogto ah.
1930s waxaa magaalada Burco xarun u ahayd dhaqdhaaqii uu hogaaminayey Xaaji Faarax Oomaar waxaanay si toos ah isugu xidhnaayeen jaaliyadii reer East Africa. Igririiska dhaqdhaqaaqaa aad ayuu uga qayliyey maadaa oo uu ahaa mid ay hogaaminayaan rag ilbax ah oo dibedana xidhiidho la leh.
Isla xiligaa waxaa bilaabmay dagaaladii xoogagii Sheekh Bashiir hogaaminayey oo iyagu xabad kala horyimi gumaystihii.
1945 ayuu Sh.Bashiir weerar ku soo qaaday magaalada Burco waxaana si xun loo dhaawacay DC gii Ingiriiska ahaa ee Burco xukumayey, madaxa ayaanay xabadi kaga dhacday.
Burco waxaa berigaa ku yaalay xerada Ciidamada ingriiska ugu wayn oo la dhisay 1939 waa halka iminka loo yaqaan xerada GAASKA. Sababtuna waxay ahayd maadaama oo dagaalada badankoodu kaga socdeen dhinaca Bariga in uu difaac uga dhigo. Sh. BASIIR AHN waxaa lagu qaaday weero culus waana maalintii ay baxday maahmahdii Cabdi Gucuuse ee ahayd "Sheekh Bashiiroow ismuujinayee intaan layna biyo dhiijin meesha inaga saar.
Sheekh Bashiir iyo ciidamadiisii markii ay ka baxeen magaaladii Ingiriiskii wuu ka daba duulay waxaanu soo dilay Mujaahid Sheekh Badhiir iyo rag kale oo ciidankiisii ka mid ah.
Habada sida ay taariikhdu Werisay, dagaaladii daraawiishta waxaa ku le'day Soomali aad u badan sarkaal ka keliya ee daraawiishtu dishay waa KOOFIL. Halka aan cidiba tirin karin Somalida ku dhimatay.
Sanadihii 1911-1912-1913 waa sanadihii la baxay Xaaraama-Cume waxaana la sheegay in dadkii ku noolaa British Protectorate ay dhinteen sadex meelood oo meel. Dadkaasi waxay u dhinteen Colaad ( col iyo daraawiish), Cuduro iyo macaluul.
Macluumaadkan badankiisa waxaa laga helayaa British library, Lodnon.
Reer UK please taariikhda soo daaya oo waxaa VOA iyo BBC da cusub laga shubayo dhagax inooga dhiga.
xigasho ex-wasiir Cali Hassan